Fampisehoana vaovao ao amin'ny Android M Developer Preview 2 | Androidsis
Androany vao namoaka ny fanavaozana faharoa ny Android M Developer Preview ny Google. Efa nihaona tamin'ity I / O 2015 ity tolo-kevitra vaovao nataon'i Google izahay rehefa nampahafantatra anay ny fomba hahatongavany amin'ity indray mitoraka ity izy Topi-maso Android M amina andiany telo, ny voalohany natomboka tamin'ny kaonferansa ho an'ny mpamorona, ny faharoa dia ilay farany ananantsika androany, ary ny farany izay ho tonga alohan'ny kinova farany rehefa hanomboka amin'ny fararano tahaka ny Android Lollipop.
Ny topi-maso faharoa dia misy fiovana tena miavaka, na dia mbola preview'ny mpamorona aza izy io ka ny fiasa sasany dia tsy hiasa raha tsy amin'ny kinova farany. Ny fanovana sasany hita ao amin'ity topi-maso ity dia maodely ho an'ny telefaona, afaka manala ireo sary masina avy amin'ny tsipika fitadiavana na fanovana fahazoan-dàlana. Ity ambany ity dia ho hitanao ihany koa ireo rohy fampidinana ny fanavaozana ho an'ireo izay manana topi-maso voalohany, na izany na tsy izany dia ho tonga andro maromaro ny OTA hanavao izany amin'ny telefaona amin'ny fomba tsotra kokoa.
1 Vatasarihana fampiharana nohavaozina
2 Mode Landscape ho an'ny Google Now Launcher
3 Fizarana vaovao ho an'ny widget
4 Safidy hamafana ny pikantsary na pikantsary
5 Safidy ho an'ny interface interface toy ny fanesorana ireo kisary amin'ny tsipika fitadiavana
6 Fitehirizana sy famafana fitadidiana
7 Fanatsarana ny zava-bita
8 Ahoana ny fametrahana Android M Developer Preview 2
Vatasarihana fampiharana nohavaozina
Ao amin'ny topi-maso Google voalohany te-hanaitra anay amin'ny lisitry ny abidia miaraka amin'ireo litera Eo amin'ny sisiny hahazoana miditra haingana amin'ny apps. Tamin'ity indray mitoraka ity dia novainy indray ny zava-drehetra tamin'ny fomba fijery efatra-andry mahazatra izay miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny tamin'ny andiany farany.
Ny mahasamihafa azy indrindra dia izay izao dia afaka swipe haingana amin'ny fampiharana ianao amin'ny alàlan'ny fandraisana ny tsipika fitetezana eo amin'ny sisiny ankavanana, izay nisy an'ireo litera ireo.
Ny iray amin'ireo safidy misongadina dia ny fahafaha-mampihetsika na mampiato ny fizarana fampiharana natolotra. Eto dia ankasitrahana fa manome ny fahefana rehetra ananan'ny mpampiasa i Google mba hanampy ity lisitry ny fampiharana ity.
Mode Landscape ho an'ny Google Now Launcher
Ao amin'ny mpandefa izay tonga amin'ny alàlan'ny teo aloha, ankehitriny dia misy ny fahafaha-mampiasa ny maody fizahantany. Raha manindry lava eo amin'ny efijery birao ianao ary mizotra mankamin'ny toeran'ny mpandefa dia hahita safidy roa ianao. Ny iray hampavitrika ny lisitry ny rindranasa vao haingana ao anaty vatasarihana fampiharana, ary ny iray hafa hampihetsika ity maodely tontolo ity ho an'ny mpandefa.
Fizarana vaovao ho an'ny widget
Toy ny amin'ny vatasarihana fampiharana, Google amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra fanovana vitsivitsy amin'ny widget. ankehitriny azo soloina haingana amin'ny alàlan'ny lisitry ny widget amin'ny alàlan'ny fakana ny tsipika mikorisa eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijery.
Ny antsipiriany iray hafa dia rehefa misy widget iray mihoatra ny iray ny fampiharana iray, izay azo idirana amin'ny swipe ilany.
Safidy hamafana ny pikantsary na pikantsary
Iray amin'ireo antsipiriany kely hafa nananan'ny Android M hatramin'ny nanambarana azy tao amin'ny keynote ao amin'ny Google I / O 2015. Raha maka pikantsary ianao dia izao hiseho ny bokotra iray hamafana azy eo akaikin'ny bokotra fizarana ihany.
Tsy misy mahavariana fa inona manampy be dia be rehefa tsy mila pikantsary izahay izay vitantsika.
Safidy ho an'ny interface interface toy ny fanesorana ireo kisary amin'ny tsipika fitadiavana
ny fahafaha-mampihetsika ny maody mpamorona amin'ny fomba hafa izay nanindry imbetsaka tamin'ny isa fanangonana ao amin'ny «About». Ary ny menio nipoitra tao amin'ny topi-maso voalohany "System UI tuner" dia toa efa misy fampiasa ao amin'ity topi-maso faharoa ity.
ankehitriny Azonao atao ny manala ireo sary masina isan-karazany toy ny batterie, Wi-Fi ary ny maro hafa avy ao amin'ny tsanganana fisehon'ny status. Safidy hanehoana isan-jaton'ny bateria toy ny hafa izay ho mora ho an'ny mpamorona noho ny antony sasany.
Fitehirizana sy famafana fitadidiana
Misy fiasa vaovao roa miandry antsika amin'ity topi-maso ity ao amin'ny rafitry ny rafitra. Iray ho an'ny "fitehirizana" izay manome antsika topy maso ny fomba ampiasana ny toerana fitahirizana amin'ny fitaovanao.
Ny safidy hafa dia ho an'ny asehoy ny fampiasana RAM. Azonao atao ny misafidy fe-potoana mandritra ny 3, 6, 12 na 24 ora. Ary eo ambanin'io ambany io ihany, ny pejy fanamafisana dia mampiseho ny fampiasana fahatsiarovana, fahatsiarovana tanteraka, na vola maimaim-poana misy ankoatry ny angona hafa.
Toy ny mahazatra ny bug dia tanjona iray hafa amin'ny fanavaozana ny rafitra rehetra avy amin'ireo mpamorona ary ity dia tsikaritra amin'ity topi-maso mialoha ity izay toa nihatsara ny fampisehoana sy ny valiny ny interface.
Iray segondra alohan'izay manolotra fahatsapana tsara kokoa saingy mijanona ho kinova fampiroboroboana hiomanana amin'ny famoahana farany ny Android M amin'ny fararano.
Ahoana ny fametrahana Android M Developer Preview 2
marary mitsika Android M Developer Preview 2 ho an'ny Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ary Nexus Player avy eto.
Afaka mametraka azy io dia azonao atao mandehana amin'ity torolàlana ity izay mampianatra anao hametraka an'ity karazana rakitra ity amin'ny fitaovanao.
Mampahatsiahy anao foana araho ny dingana rehetra rehefa mametraka kinova vaovao avy amin'ny fitaovana ADB, ary izay efa voalaza, ny OTA dia ho tonga afaka andro vitsivitsy hahafahanao mamonjy ny tenanao mila manao ny fametrahana amin'ny tanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Inona no vaovao ao amin'ny Android M Developer Preview 2
Ireo no fandikan'ny Samsung Galaxy A8 manaraka